Power outlets in Zimbabwe: Do I need a travel adapter? - Adaptario.ca
Yes, you need a travel adapter (plug adapter) for a trip from Canada to Zimbabwe. In Zimbabwe, people are using different plugs and electrical outlets that are not compatible with plugs from Canada!
compareZimbabwe und Canada compared
Which types of power outlets are used in Zimbabwe?
Zimbabwe uses power outlets of type D and G. Electrical outlets of type A and B, which are common in Canada, are not in use in Zimbabwe.